Yakavanzika Dzidziso - Quotes Pedia
Zuva rinoshanda: June 29, 2019
Webhusaiti yedu kero ndeye https://www.quotespedia.org.
Quotespedia ("isu", "isu", kana "yedu") inoshanda iyo https://www.quotespedia.org webhusaiti (iyo "Sevhisi").
Rino peji rinokuzivisa iwe nezvematongero edu nezvekuunganidzwa, kushandisa, uye kuburitswa kwedata kana iwe uchishanyira uye / kana kushandisa yedu webhusaiti uye / kana sevhisi uye sarudzo dzaunosangana neiyo data.
Isu tinoshandisa iyi data kupa uye kugadzirisa basa. Nekushandisa iyo webhusaiti, iwe unobvumirana kuunganidzwa uye kushandiswa kweruzivo maererano nechirongwa ichi. Kunze kwekutsanangurwa neimwe nzira muParamende Yakavanzika, mazwi anoshandiswa mune ino Dziviriro Mugariro ane zvirevo zvakafanana nezveMigariro yedu neMamiriro ezvinhu, anowanikwa kubva ku https: //www.quotespedia.org
Isu tinotora akatiwandei marudzi akasiyana eruzivo nezvikonzero zvakasiyana siyana kuti tipe nekuvandudza sevhisi yedu kwauri.
Tinogona kuunganidza ruzivo rwese rwekuti webhusaiti inowanikwa sei uye inoshandiswa (“Kushandisa Dhata”). Iyi yekushandisa data inogona kusanganisira ruzivo rwakadai seyako komputa yako Internet Protocol adhi zvishandiso zvemudziyo uye imwe data yekuongorora.
Kuchengeta & Cookies Dhata
Isu tinoshandisa makuki uye matekinoroji akafanana ekutevera zviitiko pane webhusaiti yedu uye tinobata rumwe ruzivo.
Makuki mafaera ane diki diki data inogona kusanganisira isingazivikanwe identifier. Makuki anotumirwa kubhurawuza rako kubva pawebhusaiti uye akachengetwa pane chako chinhu. Matekiniki ekutsvaga anoshandiswawo mabhakoni, ma tag, uye zvinyorwa kuti utore uye utore ruzivo uye nekuvandudza uye kuongorora webhusaiti yedu.
Iwe unogona kuraira bhurawuza rako kuramba zvese kuki kana kuratidza kana cookie iri kutumirwa. Nekudaro, kana ukasagamuchira makuki, ungatadza kushandisa zvimwe zvikamu zvewebsite yedu.
Session Cookies. Isu tinoshandisa Session Cookies kushanda webhusaiti yedu.
Vanofarira Makuki. Isu tinoshandisa Cookies Dzokutanga kuyeuka zvaunoda uye zvakasiyana siyana.
Chengetedza ma Cookies. Isu tinoshandisa ma Cookies ekuchengetedza ezvirongwa zvekuchengetedza.
Quotespedia.org inoshandisa iyo data yakaunganidzirwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana:
Kupa uye kuchengetedza webhusaiti
Kupa kuongorora kana ruzivo rwakakosha kuti tigone kuvandudza webhusaiti
Kuongorora mashandisiro ewebhusaiti
Cheki cooker idiki faira iro rinokumbira mvumo yekuiswa pane komputa yako hard drive. Paunenge wabvuma, iyo faira inowedzerwa uye cookie inobatsira kuongorora web traffic kana kukuzivisa iwe paunoshanyira imwe saiti. Cookies anotendera webhu kuita kuti apindure kwauri sewe munhu. Iyo webhu application inogona kuenderana nemabasa ayo kune zvaunoda, zvaunofarira uye zvausingafarire nekuunganidza uye nekurangarira ruzivo nezve zvaunoda. Isu tinoshandisa traffic log cookies kukona kuti ndeapi mapeji ari kushandiswa. Izvi zvinotibatsira kuongorora data nezve webhu peji traffic uye kugadzirisa webhusaiti yedu kuitira kuti ienderane nezvido zvevashanyi. Isu tinoshandisa chete ruzivo urwu nekuda kwehuwandu hwekuongororwa zvinangwa uyezve data racho rinobviswa kubva kuhurongwa. Pakazara, makuki anotibatsira kukupa iwe webhusaiti iri nani, nekutigonesa kuti titarise mapeji api aunoona anoshanda uye ausingafarire. Kuki hapana imwe nzira inotipa mukana kune yako komputa kana chero ruzivo pamusoro pako. Unogona kusarudza kugamuchira kana kuramba makuki. Mazhinji mabhurawuza anogamuchira otomatiki, asi kazhinji unogona kushandura browser rako kurongedza kuti urambe makuki kana uchida. Izvi zvinogona kukudzivirira kutora mukana wakazara webhusaiti.
Pamusoro pezvo, Quotespedia inoshandisa makuki kuratidza kushambadza kwedu kwauri pane akasiyana mawebhusaiti paInternet.
Unogona kubuda muGoogle pakushandisa makuki nekushanyira Google Zvishambadziro.
Yetatu Party Vatengesi
Vatengesi vevatatu, kusanganisira Google, shandisa makuki kupa shambadziro zvichienderana neyako kwekutanga kushandira webhusaiti.
Mashandisiro anoita Google cookie ye DoubleClick inoita kuti iite pamwe nevamwe vayo kushandira kushambadzira kwauri zvichibva pakushanya kwako kuQuotepedia Blog uye / kana mamwe masosi paInternet.
Unogona kusarudza kubva pakushandisa kuki DoubleClick cookie-inoshambadza-kushanya nekushanya Zvishambadziro. (kana nekushanya aboutads.info.)
Vatatu mapato anogona kushandisa makuki, web beacons, uye matekinoroji akafanana kuunganidza kana kugamuchira ruzivo kubva kune yako kushanya webhusaiti uye kune imwe nzvimbo pane internet uye kushandisa iyo ruzivo kupa chiyero masevhisi uye chinangwa shambadziro.
Isu tingashandisa vatatu vechipatara Vanotarisira kuongorora nekuongorora kushandiswa kweTe Service.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvakavanzika maitiro eGoogle, ndapota shanyira Google Zvakavanzika & Mitemo peji rewebhu: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Tinogona kugadzirisa yedu Yakavanzika Policy nguva nenguva. Iwe unorayirwa kuti uongorore iyi Yakavanzika Policy nguva nenguva kune chero shanduko. Shanduko kune ino Yakavanzika Policy inoshanda kana yaiswa pane ino peji.